Olona Anodized Aluminium Hex Standoff, uHex Aluminium Standoffs uMvelisi eTshayina
Inkcazo:IAluminiyam Hex Yimiyo,I-Anodised Aluminium Hex Standoff,IAluminium Hex Ibhinqa elicekeceke lokuThintela ukuHamba ,I-Hex Aluminium Standoffs,,
Home > Imveliso > I-Standoffs ezenziwe ngokwezifiso > IAluminiyam Hex Yimiyo
Iintlobo zeMveliso ze- IAluminiyam Hex Yimiyo , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, IAluminiyam Hex Yimiyo , I-Anodised Aluminium Hex Standoff ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Precision cnc elenzelwe ukumiswa kwealuminium M3
I-M3 i-Aluminium Hardware Drone Ihlanganisene
iyonke M3 aluminium anodised standoff
Umbono weSpecial Precision Blue Anodised Aluminium M3 Inyathelo lowesilisa / lowesifazane
Ixesha leSiko ubude I-Hex iNqanaba lokuziQhelanisa neAluminiyam imeyile
Ukuchaneka okuphezulu kwe-hex aluminium kuma-quadcopter I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075...
Ingcaciso yeMveliso: Ukuthengisa okufudumeleyo okuqina okune-aluminium enemibala egqamileyo IHobbycarbon ngumenzi oqeqeshiweyo obalasele kwi-Carbon fiber kunye nezixhobo ezimalunga neshumi leminyaka yamava. Ukuze uhlangabezane nemfuno yabathengi...
Uhlobo lwe anodised aluminium enemibala engafaniyo yombala I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium /...
Ixabiso lento: USD 0.19 / Piece/Pieces
I-M4 imeyile eyi-35mm yealuminiyam yegolide Ngaphandle kweAluminium Hex Standoff, sikwanayo neAluminium Round Standoff, iAluminium yeNyathelo elimiyo, iAluminium Knoffled Standoff, IAlbum Signoffs Isishwankathelo seNkampani FAQ Q:
Iibhodi ze-aluminium ze-aluminium ezimile ze-M6 Abanye abathengi banokundibuza ukuba kutheni ndingakhethi i-aluminium engama-7075 ukwenza i-aluminium standoff. Kungenxa yokuba ubunzima be aluminium ezingama-6061 banele. Ngaphezu kwe-7075 kunzima...
Ubudoda obudoda obuxutywe kwi-hex ukuma kwe-aluminium okanye i-nylon I-Anodised Aluminium Hex Standoff inobuso obuhle kunye nentambo yomfazi kwiziphelo zombini. I-Aluminium isisindo esilula kunye nokuchasana nokulungiswa, ngoko ke isetyenziswa...
Ingcaciso yeMveliso: I-standoff ekhethekileyo yokuxuba umbala we-hex aluminium standoff IHobbycarbon ngumenzi oqeqeshiweyo obalasele kwi-Carbon fiber kunye nezixhobo ezimalunga neshumi leminyaka yamava. Ukuze uhlangabezane nemfuno yabathengi...
Ukonakala kwemveliso: Isentengiso eshushu se-aluminium inyathelo lokuma eline-knurled I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso:...
Ukonakala kwemveliso: Uyilo olutsha lwe-standoff hex aluminium inyathelo lokuma I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso:...
Ukonakala kwemveliso: Umbala opheleleyo anodised hex aluminium standoff I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061...
Ingcaciso yeMveliso I-Multicolor Anodised I-hex Aluminium Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
I-Aluminium yentsimbi ye-Stainless Brass I-Hex Spacer Independent aluminum hex standoff is useless,it normally connect with other hardware product.such as screws,nuts and so on. Our standoff have thread in the both end and the thread size is M3.Of...
Umbono weSpecial Precision Blue Anodised Aluminium M3 Inyathelo lendoda / elomfazi Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye...
Ixabiso elipheleleyo i-hex ityhubhu yenyathelo le-aluminium intambo yokuluka Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
Ukuthengiswa okuShushu kweAlumum Anodised Hex Sign Support Inkxaso yeShishini Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye...
I-M3 i-Aluminium Hardware Drone Ihlanganisene I-hex Standoffs yethu, eyenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-aluminium, ifaka ubuhle obugqityiweyo be-anodised.both glossy kunye neMatte ziyafumaneka. I-Hex standoffs inikezela ngokujonga ngoku...
iyonke M3 aluminium anodised standoff Kwi- aluminium ukuma, kukho iindlela ezininzi kwisitokhwe sethu kunye neminye imibala (Imibala eli-9) Ezinje nge: Aluminium Round Standoff, Aluminium Knoffled Standoff, Aluminium Stepoffoff, Aluminium Hex...
Umbono weSpecial Precision Blue Anodised Aluminium M3 Inyathelo lowesilisa / lowesifazane Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini...
Ixesha leSiko ubude I-Hex iNqanaba lokuziQhelanisa neAluminiyam imeyile Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya....
KwiChina IAluminiyam Hex Yimiyo Abaxhasi
I-hex Standoffs yethu, eyenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-aluminium, ifaka ubuhle obugqityiweyo be-anodised.both glossy kunye neMatte ziyafumaneka. I-Hex standoffs inikezela ngenkangeleko yanamhlanje enemigca ecocekileyo ekhangeleka imangalisa xa ifakwe kwinto enekona. Kuya kuba lula ngakumbi kwisixhobo ukufakela ii-standoffs ngenxa ye-cornors Thick thickness eyenza i-standoff ibe namandla, inokuthwala iphawundi ngaphezulu ngaphandle kwempembelelo. Ilungele i-drone enkulu kunye ne-anti-impembelelo ye-drone.
Ubungakanani obuziimpawu zonke zivumelekile kuthi.Ngokuba olona hlobo lwaziwayo, njenge-M3X25mm, M3X30mm, M3X35mm ubude, bahlala banemibala yonke kwisitokhwe, banokuhamba ngexesha elifanelekileyo.
IAluminiyam Hex Yimiyo I-Anodised Aluminium Hex Standoff IAluminium Hex Ibhinqa elicekeceke lokuThintela ukuHamba I-Hex Aluminium Standoffs IAluminiyam Hex Yimihla